अनलाइनबाट बैंकिङ कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरा ख्याल गर्नुहोस् - Tech News Nepal Tech News Nepal
मंगलवार, जेष्ठ २५, २०७८ १६:४१
काठमाडौं । कोभिड-१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै सरकारले देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेकाे छ । यस्तो अवस्थामा घरमै बस्नुभन्दा अर्को सुरक्षित विकल्प छैन । निषेधाज्ञाकै कारण अधिकांश मानिसहरू अनलाइनबाटै बैंकिङ काराेबार र भुक्तानी कार्य गरिरहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायकले पनि प्रयोगकर्तालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । तर अनलाइनबाट कारोबार गरिरहँदा हरेक प्रयोगकर्ता सजग हुनुपर्छ ।
यसैबीच दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रयोगकर्तालाई अनलाइन बैंकिङ (मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ) प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सजग गराएकाे छ । त्यसैका आधारमा आज हामी तपाईंका लागि केही यस्ता महत्वपूर्ण टिप्स बताउँदै छौं, ताकि तपाईंलाई अनलाइनमा कसैले ठग्न नसकोस् ।
आफ्नो Bank Account, Password, PIN Code, CVC, OTP कहिले पनि कसैलाई नदिउ । बैंकका कर्मचारीहरुले कहिले पनि तपाइँको Password, PIN Code, CVC, OTP जस्ता विवरण नमाग्ने हुँदा Fake Call/Scam हरुबाट बचौं ।
सार्वजनिक स्थलका Computer (जस्तै Cyber Café etc.) वा सार्वजनिक Wi-Fi को प्रयोग गरी Online Banking सेवा प्रयोग नगराैं ।